Asia Coffee-Trade Picks Up in Vietnam Ahead Of Main Harvest, Indonesia Dull | Myanmar Business Today
HomeBusinessRegionalAsia Coffee-Trade Picks Up in Vietnam Ahead Of Main Harvest, Indonesia Dull
Roasted coffee beans are seen at the coffee company of Simexco Dak Lak Limited in the town of Di An in Binh Duong province, Vietnam July 8, 2019. Picture taken July 8, 2019.
Phuong Nguyen and Mas Alina Arifin (REUTERS)
HANOI/BANDAR LAMPUNG, Indonesia
The differential narrowed from last week as benchmark prices increased,atrader in Lampung said. Trade however continue to be minimal since harvest season has passed. ($1 = 23,200 dong)
နိုဝင်ဘာလလယ်တွင် ကော်ဖီထွက်တော့မည်ဖြစ်ရာ အဆိုပါ ကာလမတိုင်မီအတွင်း ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် ကော်ဖီအရောင်းအဝယ်များ တက်လာခဲ့ပြီး အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဈေးကွက်တွင်တော့ သီးနှံရိတ်သိမ်းသည့် ရာသီကုန်သွားသဖြင့် အရောင်းအဝယ်နှေးနေကြောင်း ကုန်သည်များက ဆိုသည်။
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် ကော်ဖီစိုက်ဧရိယာအကြီးဆုံး ဖြစ်သော Central Highlands ရှိ လယ်သမားများသည် ကော်ဖီ တစ်ကီလိုဂရမ်လျှင် ‌‌ဒေါင် ၃၄၀၀၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ဒသမ၄၇ ဒေါ်လာ) ရှိခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့သည့် အပတ်က ၃၃၀၀၀ ရှိခဲ့သည်။
အချို့သော ‌ဧရိယာများတွင်တော့ အစောပိုင်း ကော်ဖီရိတ်သိမ်းခဲ့ကြပြီး ‌သြဂုတ်လကတည်းက ‌အရောင်းအဝယ်အေးနေခဲ့ပြီးနောက်တွင် ယခုသီတင်းပတ်တွင်တော့ အရောင်းအဝယ်ပြန်ကောင်းလာခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်တွင် နာကရီမုန်တိုင်းကြောင့် ကော်ဖီစိုက်ဒေသများတွင် ရေကြီးရေလျှံမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း သီးနှံများအပေါ် ထိခိုက်မှု အနည်းငယ်သာရှိခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာလတွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသည် ကော်ဖီတန်ချိန် ၈၇၅၀၀ တန် တင်ပို့ခဲ့ပြီး စက်တင်ဘာလကထက် ၅ဒသမ၃ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားခဲ့သည်။
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရှိ ကုန်သည်များသည် ၅ ရာခိုင်နှုန်း အနက်၊ အကျိုး ရှိသည့် grade2robusta ကို တစ်တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂၀-၁၃၀ ဖြင့် ရောင်းချခဲ့သည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ grade4defect 80 robusta ကော်ဖီများကို တစ်တန်လျှင် အမေရိကန်‌ဒေါ်လာ ၁၉၀-၂၀၀ ဖြင့် ရောင်းချနေသည်။ အဆိုပါ ဈေးနှုန်းမှာ ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်က ဈေးနှုန်းဖြစ်သည့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅၀-၂၆၀ နှင့် နှိုင်းယှဥ်ပါက ဈေးလျော့ကျလာသည့် သဘောဖြစ်သည်။
SourcePhuong Nguyen and Mas Alina Arifin (REUTERS)
Previous articleAustralian Dollar Loses Out as NZ$ Gets The Yield Advantage
Next articleSoftbank’s Yahoo Japan in Merger Talks With Line, Shares Jump